Global Voices teny Malagasy » Okraina : Ny Lafy Tsara Sy Ratsin’ny Fampihenana Ny Fanaintainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Okraina : Ny Lafy Tsara Sy Ratsin'ny Fampihenana Ny Fanaintainana
Voadika ny 06 Septambra 2011 0:09 GMT 1	 · Mpanoratra Maryna Reshetnyak Nandika imanoela fifaliana
Fomba ahoana no ahafahan'ny fitsaboana fanolo  manova ny fiainan'ny olona miaina amin'ny fidorohana zava-mahadomelina? Ireo bilaogera avy amin'ny Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine (ASTAU) [ru] na Fikambanan'ny Mpisolovavan’ ny Fitsaboana Fanolo ao Okraina, dia mampiasa ny bilaoginy hizaràna ny traikefa niainany.
Ilay bilaogera Viktoria Lintsova dia nanaraka ny fitsaboana fanolo ny opium nandritra ny telo taona. Amin'ny maha mafàna fo azy ao amin'ny y ASTAU, matetika izy no misolo tena ny fikambanana amin'ny karazana famelabelarana, adihevitra an-databatra boribory, ary seho mivantana amin'ny fahitalavitra izay hampahafatarany ny foto-kevitry ny fandaharan'asa fampihenana ny fanaintainana, amin'ny fampiasana ny tantaram-piainany ho ohatra amin'ny vokatra tsara azo avy amin'izany fandaharan'asa izany, izay natao ho an'ireo miaina miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. Any amin'ny renivohitr'i Kirovohrad , tanàna nahaterahany, i Viktoria dia nametraka vondrona mahaleo tena izay manampy ireo marary manaraka ny fitsaboana fanolo mba hiaraka hiady amin'ny olana iraisana.
Ao amin'ny lahatsorany vao haingana dia mamakafaka ny lafiny tsara sy lafiny ratsy amin'ny fiainany, tamin'ny naha marary nanaraka ny fitsaboana fanolo azy izy, ary mamintina fa na teo aza ireo fitsapana sasany dia nisy fiovana tsara azo notsapain-tanana ny fiainany. Toy izao ny nosoratany [ru] :
Rehefa mahatsiaro tena ho tezitra na sorisorena aho satria tsy maintsy mamonjy ny toby fitsaboana fanolo isan'andro, sy koa rehefa mitsiriritra ireo olona izay miaina tsy miankin-doha amin'ny fanafody, dia mahatsiaro ny fiainako fony aho mpidoroka, fony aho mbola tsy nanao fitsaboana fanolo, fa mbola niankin-doha tamin'ny fihinana zava-mahadomelina. Isa- maraina dia tsy maintsy mitady ‘fahasambarana’ ho ahy manokana aho, izany hoe mitady zava-mahadomelina hatrany.
Notantarain'i Viktoria ny fomba nahatonga azy ho niankin-doha tamin'ny zava-mahadomelina ary nanoritsoritany ireo fotoana maro nanandramany handresy ny fiankinan-doha. Hoy izy nibilaogy :
Lasa ‘takalonain'ny ‘kef’ (karazana zava-mahadomelina)’ aho ny taona 1994, tamin'ny fotoana nanandramako zava-mahadomelina voalohany indrindra dia lasa namako akaiky avy hatrany ireny nandritra ny taona maro. Tao anatin'ny volana vitsy monja dia lasa niankin-doha aho, midika fa ny ôpioma dia efa lasa ampahany amin'ny toe-batako (raha ny vatana no resahina), ary ireo mpidoroka zava-mahadomelina irery ihany no afaka mahatsapa izany zavatra mahatsiravina izany izay nandeha tao an-tsaiko……Karazana fahamelohan-tena, fikorotanana, famoizam-po, ary ny tena loza, dia nanjary nankahala ny tenako aho noho ny filàna zava-mahadomelina izay nahatonga ahy hanao fihetsika mahamenatra ahy, na dia taona maro aty aoriana aza.Tsy ho voatanisa hoe impiry aho no nanandrana nanohitra fiankinan-doha amin'ny fanandramana tsy hikasika zava-mahadomelina, Nandeha nanaraka fitsaboana tamin'ny dokotera mpitsabo ireo mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina sy ireo mpitsabo saina aho. Nifindra tamin'ny faritra samihafa, eny fa na firenena samihafa mihitsy aza, nefa ny olako amin'ny zava-mahadomelina dia nanaraka ahy nandritra ny fotoana rehetra toy ny haizina sy tahotra eo amin'ny fiainako, izay nankahalaiko, saingy tsy voaovako. Izay ezaka vaovao mitaona amin'ny fitsaboana ary famerenana mankany amin'ny fiaraha-monina dia tsy nahomby ary miafara hatrany amin'ny fampiasana zava-mahadomelina niaraka tamin'ny fahadisoam-panantenana, fampijalian-tena, ny alahelon'ireo manodidina, ny alahelo amin'ny fahatsapana ho irery sy ny fahatsapana ho voafatotra ao anaty fandrika.
Nandritra ny fotoanan'ny fitsaboana, zavatra iray ihany no mba nofinofiko – hiaina ny toy izao mandritra ny fotoana rehetra, tsy mandray zava-mahadomelina, hijery ny tontolo ary ho faly, hanintsy ny hadalako taloha, hanavao ny zavatra rehetra nosimbain'ny zava-mahadomelina.
Ankehitriny i Viktoria dia manana fiainana vaovao ary manararaotra ny fotoana rehetra hanohanana ny fitsaboana ary miaro ny filàna sy ny zon'ny marary. Nampakatra lahatsoratra  izy :
Taona fahateloko amin'ny maha marary tsaboina ahy ity, ary indraindray aho mahatsiaro reraka noho ny fandehanana isan'andro any amin'ny toby fitsaboana sy ny famerana ny fahafahako mihetsika ( tsy misy afa-tsy ireo tanàna nahafahako nahita Ednok [mitovy amin'ny Buprenorphine] no mba afaka nalehako), raha ny marina dia mahita ‘lafy ratsy’ betsaka aho nefa mivandravandra kosa ny ‘lafy tsara’ ary mandresy ny zavatra rehetra – Afaka miaina tsy mandray zava-mahadomelina aho! Afaka mandrindra ny fiainako ampitso aho, afaka mifoha tsy manahy ny tsy ho ampy dozy, afaka mandeha eny amin'ny arabe ary tsy matahotra ny polisy, afaka miaina tsy mandainga, tsy mila miafina intsony na matahotahotra ny zavatra rehetra!
Ary ny fanaratsiana rehetra momba ny fitsaboana fanolo izay aparitaky ny haino aman-jery, sy ny hevitra tsy matihanin'ireo olona tsy mahalala sy mahay vava sy mahery setra ary ireo fisedrana hafa dia tokony heverina ho ampahany amin'ny ady ataonay hànana zo hiaina. Ho an'ny zo hahazo ny fitsaboana izay mety sy mahomby ho anay. Ho an'ny zo hisafidy….
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/09/06/21713/
 Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine (ASTAU) [ru] : http://astau.org.ua/
 Viktoria Lintsova : http://astau.org.ua/blog/viktorija_lintsova/
 misolo tena : https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/06/29/ukraine-harm-reduction-activists-share-their-international-experience/
 nametraka vondrona mahaleo tena : https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/04/27/ukraine-blogging-about-dreams/
 nosoratany [ru]: http://astau.org.ua/chitat/group_37/item_334/